Raharaha iray isan’ny fototry ny maha-firenena ny firenena ny fanabeazana sy ny fampianarana ny taranaka. Azo ambara fa manokana volabe mihitsy amin’io raharaha iray io ny fanjakana isa-taona. Ny ray aman-dreny moa dia mandany mondrokely mihitsy, hoy ny fitenenana, ka mety ho lany namidy hatramin’ny akoho mikotrika sy ny tannin-ketsa rehefa hoe hanaovana izay hahatafita ny taranaka amin’ny fampianarana azy. Endrika iray ibaribarian’ny fitiavan’ny ray aman-dreny ny zanany izany.
Izany rehetra izany koa no mbola mahasarotiny anay hoe aoka mba hojerena akaiky ny fampitaovana sy ny fananganana fotodrafitrasa momba ny fampianarana mbamin’izay fanoitran’ny fampirisihana ny mpampianatra sy ny mpanabe mba hahamendrika izany voninahitry ny tontolon’ny fampianarana sy fanabeazana izany.
Izahay dia manipika hatrany fa misy ny vola tokony hahafahana miatrika sy mampivaingana izany saingy lany manta sy avelan’ny mpitondra fanjakana ho lasan’ny vahiny mpandroba eto fotsiny.
Rehefa tsy efan’ny fanjakana ny adidiny amin’ny taranaka amin’izany raharaham-pampianarana sy fanabeazana izany, dia ireny fa miroborobo toy ny anana ny sekoly tsy miankina.
Tany ambadika ny 40 taona tany dia nifandrombahan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra ny nampiditra ny zanany ho any amin’ny sekolim-panjakana fa tato anatin’ny 10 taona farany izao dia saika ny ray aman-dreny tsy manam-bola handoavana ny saram-pianaran’ny zanany eny amin’ny sekoly tsy miankina sisa mampiana-janaka any amin’ny sekolim-panjakana, ary hita koa izany hatrany ambanivohitra.
Tsy ratsy avokoa aloha ny fampianarana amin’ny sekoly tsy miankina fa izahay dia mahita fa misy ezaka goavana tokony hataon’ny fanjakana mba hamerenana ny hasin’ny sekolim-panjakana e !
Tsy ratsy avokoa ny sekoly tsy miankina, saingy mba mahavariana ihany koa ny mandre fa misy amin’ireny mpampianatra any amin’ny sekoly tsy miankina ireny no mitovy laharana amin’ny mpiasa any amin’ny orin’asa afa-kaba ny karama valin-kasasarana raisin’izy ireny.
Tsy hoe efa manome vahana ny famotehana ny asa fampianarana ny mpampianatra amin’izany fa taratra ny fahantrana misy eto izany ka tonga amin’ilay fitenenana hoe “karama vary masaka”.
Mila fanaraha-maso avy amin’ny fanjakana koa anefa izany fa tsy ny kalitaon’ny fampianarana ihany akory no tokony hahasarotiny azy ireny na ny tontolo manodidina ny sehatra ampianarana.
Na ny mpisafo raharaha momba ny asa (Inspection de travail) na ny fanaraha-maso ny raharaham-pampianarana (Inspection de l’éducation nationale) dia tokony midina an-tsehatra amin’izany fa tsy mety e! Ekena fa mahantra ny firenena sy ny vahoaka fa mba tokony jerena akaiky koa ny saram-pianarana amin’ireny sekoly tsy miankina ireny, ary indrindra ny tokony ho farafahakeliny amin’ny valin-kasasaran’ny mpampianatra.
Tsy mahagaga anefa raha mitranga izany fahaverezan-kasin’ny asa fampianarana izany satria na ny mpampianatra mpiasam-panjakana aza ange ka tena faralahin’olona eto amin’ny tany ama-monina izao e !
Inty sy nday: Hiroso sa hihemotra ny Hcc?
Ratsiraka sy Ravalo ary Rajao: Nihaona mangina
Parlemantera HVM: Lasa saribakolin’ny mpitondra
Mahamasina : lalao Basket niafara tamin’ny famonoana “Surveillant”
Môpera Prospère: “Tolon’ny Malagasy fa tsy an’ny mpanao pôlitika irery”
Fifidianana: Mila olona ankatoavin’ny rehetra ny fikarakarana
Ankatso: Mpianatra voakarama nitoraka « cocktail Molotov »